Banyere anyị - Bruicojewelry Ngwa Co., Ltd
Bruico ọla-enye ọkachamara ọla customization, imewe, mmepụta na nhazi ọrụ, tumadi na-elekwasị anya 14k na 18k Mozis azụmahịa. Bruico ọla e guzobere na 2015 na enyene ebe nke 500 square mita, nke nwere ya factory, bipụtara igwe, polishing igwe, CNC igwe na electric ígwè ọrụ.
Anyị na-enye ndị ọkachamara ọla imewe na mmepụta ọrụ. Anyị mere n'ịrụzu oké ihe ma guzosie ike a ọrụ otu banyere ịzụta, ahịa, admin, ego na ahịa. Ugbu anyị ụlọ ọrụ nwere 50 ọrụ, 3 na-emepụta na 2 ịbịaru technicians. Anyị otu na-eto eto na energetic, na fabulous ọrụ aka mmụọ na-atọ ejiji uche. Anyị nwere ike ikwu na ndị ahịa chọrọ n'ime 48 awa.
Anyị nwere ọgaranya ahụmahụ ndị na-ọla imewe na mmepụta. Elu àgwà na-ekwe nkwa na a tụkwasịrị obi. Anyị na ngwaahịa nwere a dịgasị iche iche nke ojiji, dị ka ememe n'etiti intimates, ugbu a n'ihi na nkwalite, onyinye maka nnukwu ihe. The iwu ndị tumadi si niche ọla-echekwa, ejechi akwụkwọ na-emepụta na boutiques.